Frp: Solberg meel haku sheegto xaalada gabadhii aan darteed xukuumada uga baxnay. - NorSom News
Frp: Solberg meel haku sheegto xaalada gabadhii aan darteed xukuumada uga baxnay.
Siv Jensen oo ah gudoomiyaha xisbiga Frp, aheydna wasiirkii maaliyada Norway ayaa reysulwasaaraha Norway, Erna Solberg, ka codsatay inay ka warbixiso xaalada gabadhii ku biirtay ururka daacish ee sababteeda ay xisbiga Frp u doorteen inay uga baxaan dowlada ay hogaamiso Solberg.
Gabadhan oo asal ahaan ajnabi muslim ah ayaa heysata dhalashada dalkan Norway, waxeyna iyada oo dhalinyaro ah ku biirtay ururka Daacish ee ka dagaalamayay gudaha dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Waxeyna ku guursatay halkaas, iyada oo dhashay labo caruur ah.
Sanadkii 2018 ayay gabadhan dowlada Norway ka codsatay in loo soo qaado Norway, maadaama uu mid kamid ah ilmaheeda aad u xanuunsanyahay, una baahanyahay daaweyn caafimaad oo deg-deg ah. Balse baarlamaanka Norway ayaa codsiga gabadhaas diiday, waxeyna si aqlabiyad ah isugu raaceen in gabadhaas iyo ilmaheeda aan Norway loo soo qaadin.
Bilowgii Sanadkan 2020 ayay dowlada Norway halmar si lama filaan ah isku isbadashay, waxeyna gabadhan iyo labo ilmo ah oo ay dhashay laga soo dajiyay Norway. Iyada oo ujeedku uu ahaa in gargaar caafimaad loo fidiyo ilmaha ay haweeneydan dhashay oo heysta dhalashada Norway, masuuliyadna ay ka saarantahay dowlada Norway.
Xisbiga Frp oo awalba ayaa maalmo kadib isaga baxay xukuumada ay hogaamiso Erna Solberg, iyaga oo sabab ka dhiganayo go´aanka soo qaadista gabadhaas Norway lagu keenay.
Gabadha la keenay ayaa isla daqiiqadii Norway laga soo dajiyayba waxaa loo dhaadhicyay xabsiga dhexe, waxaana kiis dacwad ah ku furay hey´addaha sirdoonka Norway. Halka caruurteedii lagu wareejiyay hey´adda xanaanada caruurta(Barnevern) oo la shaqeynayo waalidka gabadha la xiray. Waxaana wali kiiskeeda ku socdo baaritaan laamaha amniga, iyada oo aan wali maxkamad lasoo hortaagin.
Gudoomiyaha xisbiga Frp ayaa hada dowlada ay hogaamiso reysulwasaare Erna Solberg weydiinayo meesha uu ku danbeeyay kiiska gabadhaas iyo xaaladaha kale ee la xiriira.
Xigasho/kilde: Ber Erna svare om «IS-kvinnen».
Previous articleDaawo waalidiinta Tawfiiq: Waalidku yeysan ku dhex milmin khilaafka maamul ee labada guruub.
Next articleNorSIS: Ka digtoonow adeegsiga Password ka kooban: 1234